GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Marathi Maya Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
N’OTU mba na-abaghị ọgaranya, otu okenye aha ya bụ François kwuru, sị: “Agha dara mgbe e mechara ntụliaka. N’ihi ya, ọtụtụ puku ụmụnna anyị hapụrụ ụlọ ha gbaa ọsọ ndụ. Nri na ọgwụ bịara dị ụkọ. Nke a hụrụ ahụ adịrị ezigbo ọnụ. Ụlọ akụ̀ mechichara emechi. Ego adịghịzi n’ígwè ndị e si na ha adọta ego. E nwedịghị nke na-arụ ọrụ.”
Ozugbo ụmụnna nọ n’alaka ụlọ ọrụ nụrụ ihe na-emenụ, ha malitere izigara ụmụnna ndị gbagara n’Ụlọ Nzukọ Alaeze dị iche iche ego na ihe ndị ọzọ dị ha mkpa. Òtù abụọ na-akwarịta mgbọ nọchichara ụzọ n’obodo ahụ. Ma, ebe ọ bụ na ha abụọ macha na Ndịàmà Jehova anaghị akwado òtù nke ọ bụla, ha na-ekwe ka ụgbọala si alaka ụlọ ọrụ na-agafe.
Nwanna François kwuru, sị: “Mgbe anyị na-aga n’otu Ụlọ Nzukọ Alaeze, ndị agha zoro ezo gbawara anyị égbè. Ma, mgbọ atụtaghị anyị. Mgbe anyị hụrụ otu onye agha bu égbè ka o ji ọsọ na-abịa, anyị tụgharịrị ụgbọala anyị ozugbo, nyesie ya ọkụ ike ma laghachi alaka ụlọ ọrụ. Obi dị anyị ụtọ na Jehova napụtara anyị. Ụmụnna ndị gbagara n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ anyị na-aga dị otu narị na iri atọ. N’echi ya, ha niile si n’ebe ahụ gaa n’ebe ọzọ ọkọ na-agaghị akọ ha. Ụfọdụ ụmụnna gbatara ọsọ ndụ n’alaka ụlọ ọrụ. Anyị ji Baịbụl na-akasi ha obi, na-enyekwa ha ihe ndị dị ha mkpa ruo mgbe ọgba aghara ahụ biri.”
François kwukwara, sị: “Ụmụnna si n’ebe dị iche iche n’obodo ahụ mechara detara alaka ụlọ ọrụ akwụkwọ ozi, kelee ha ezigbo ekele. Otú ahụ ụmụnna ndị nọ n’ebe ndị ọzọ si nyere ha aka mere ka ha tụkwasịkwuo Jehova obi.”
Mgbe ọ bụla e nwere ọdachi, ihe anyị na-eme abụghị naanị ịgwa ụmụnna anyị ka ha gaa “nyaa ọkụ, rijuokwa afọ.” (Jems 2:15, 16) Kama, anyị na-achọ otú anyị ga-esi egboro ha mkpa ha. Ọ bụ ụdị ihe a ka ndị na-eso ụzọ Jizọs mere n’oge ndịozi. Mgbe ha nụrụ na ụnwụ ga-ada, ha “kpebisiri ike, onye ọ bụla n’ime ha dị ka o nwere ike inye, izigara ụmụnna bi na Judia ihe enyemaka.”—Ọrụ 11:28-30.
Ebe anyị na-ejere Jehova ozi, anyị na-eji ego anyị na ihe ndị ọzọ anyị nwere enyere ndị ọzọ aka. Ma, ndị mmadụ kwesịkwara ịnụ okwu Chineke. (Mat. 5:3) Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha gaa mee ndị mmadụ ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ ya. Ihe mere o ji nye ha iwu a bụ ka ha nyere ndị mmadụ aka ịghọta na ha kwesịrị ịmụ gbasara Chineke. (Mat. 28:19, 20) Anyị na-eji oge anyị, ike anyị, na ihe ndị ọzọ anyị nwere arụ ọrụ a Jizọs nyere anyị. Anyị na-ejikwa onyinye anyị nwetara maka ozi ọma a na-ekwusa n’ụwa niile enyere ndị nwere ọdachi aka. Ma, ihe kacha mkpa a na-eji onyinye ndị ahụ eme bụ ịkwado ozi ọma a na-ekwusa na ihe ndị ọzọ gbasara Alaeze Chineke. Anyị na-esi otú ahụ egosi na anyị hụrụ Chineke na ndị agbata obi anyị n’anya.—Mat. 22:37-39.
Obi kwesịrị isi ndị niile na-akwado ozi ọma Ndịàmà Jehova na-ekwusa n’ụwa niile ike na e ji onyinye ha na-eme ihe e kwesịrị iji ya eme. Ì nwere ike inyere ụmụnna gị aka? Ị̀ chọrọ iji onyinye gị na-akwado ozi ọma anyị na-ekwusa? Ya bụrụ otú ahụ, “ajụla imere ha ihe ọma bụ́ ndị e kwesịrị imere ya, mgbe ọ dị n’ike aka gị ime ya.”—Ilu 3:27.
Ọtụtụ ndị taa na-eme ụdị ihe ahụ e mere n’oge Pọl onyeozi. Ha “na-ewepụta” ma ọ bụ kpebie ego ole ha chọrọ inye n’onyinye ma tinye ya n’igbe e dere “Maka Ọrụ Zuru Ụwa Ọnụ.” (1 Kọr. 16:2) Kwa ọnwa, ọgbakọ ọ bụla na-ewekọta ego ha nwetara n’igbe ahụ ma zigara ya alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova nke na-elekọta mba ha bi. Mmadụ nwekwara ike iji aka ya zigara alaka ụlọ ọrụ na-elekọta mba o bi ego ọ chọrọ iji nye onyinye. Ị chọọ ịmata aha ụlọ ọrụ iwu kwadoro nke Ndịàmà Jehova ji arụ ọrụ ná mba i bi, jụọ alaka ụlọ ọrụ na-elekọta mba ahụ. I nwere ike inweta adres alaka ụlọ ọrụ ahụ n’ebe anyị na-edebe ihe n’Ịntanet, bụ́ www.jw.org/ig. Ụdị ihe ndị i nwere ike iji aka gị zigara alaka ụlọ ọrụ bụ:
O nwere ike ịbụ ego, ọla, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ e nwere ike ireta ego.
E kwesịrị izitekọta ha na akwụkwọ ozi iji kọwaa na ihe ndị ahụ bụ onyinye.
Mmadụ nwere ike inye alaka ụlọ ọrụ ego ma kwuo na ya nwere ike iwereghachi ya mgbe ọ bụla ọ dị ya mkpa.
O kwesịrị izitekọta ya na akwụkwọ ozi iji kọwaa na ya nwere ike iwereghachi ego ahụ mgbe ọ bụla ọ dị ya mkpa.
E wezụga inye onyinye ego na ihe ndị ọzọ e nwere ike ireta ego, e nwere ụzọ ndị ọzọ e nwere ike isi nye ihe iji kwado ozi Alaeze nke a na-eje n’ụwa niile. E dere ha n’okpuru ebe a. N’agbanyeghị nke ị họọrọ, biko buru ụzọ kpọtụrụ alaka ụlọ ọrụ na-elekọta mba i bi ka i nwee ike ịmata nke iwu kwadoro ná mba ahụ. Ebe ọ bụ na mba ọ bụla nwere iwu nke ha, ọ dị mkpa ka mmadụ buru ụzọ jụọ ndị ọkàiwu tupu ya ahọrọ ụzọ kacha mma ọ ga-esi nye onyinye.
Ego E Tinyere n’Ụlọ Akụ̀: Mmadụ nwere ike ime ndokwa ka e nye alaka ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova ego o tinyere n’ụlọ akụ̀ ma ọ bụ ego ọ gbazinyere ụlọ akụ̀ ma ọ bụkwanụ ego ezumike nká ya ma ọ nwụọ. Ọ ga-eme ya otú ụlọ akụ̀ dị ná mba o bi kwuru ka e si mee ya.
Dị ka okwu ahụ bụ́ “atụmatụ ọrụ ebere” na-egosi, onye na-enye ụdị onyinye a kwesịrị ime atụmatụ nke ọma.
Ị chọọ ịmatakwu ụzọ ndị e si enye onyinye, i nwere ike ịkpọ Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova dị na Naịjirịa na telefon ma ọ bụ jiri adres e dere n’okpuru ebe a degara ha akwụkwọ ozi ma ọ bụkwanụ kpọtụrụ alaka ụlọ ọrụ na-elekọta mba ebe i bi.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Otú Anyị Nwere Ike Isi Nyere Ndị Ọzọ Aka
M Chọrọ Inye Onyinye (ga-emepere gị ebe ọzọ ị ga-anọ gụọ ya)